Playstore က app တွေ ADM နဲ့ ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ ????
Posted by ကိုဆက် ကြီး on February 10, 2015
ကျွန်တော် ဒီနေ့ တင်ပေးချ င်လေးကတော့
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းမှာ Playstore ကနေ
app တွေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတဲ့အခါ
Download Manager နဲ့ ဘယ်လိုဆွဲမလဲ
သိပြီးသား သူများကတော့ ကျော်သွားလိုက်ပါ
မသိသေးသူများကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အရင်ဆုံး လိုအပ်တဲ့ apk လေးတွေ ဒေါင်းလိုက်ပါနော်..
Download Manager ပါ မရှိသေးရင်တော့
အောက်မှာ new virsion ကို ဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ..
ကဲ လိုအပ်တာတွေ ဒေါင်းပြီးရင်တော့ စရအောင်ဗျာ.
အရင်ဆုံး ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ့် apk ဆီကို
အရင်သွား ထားပါ ....
ကျွန်တော် ကတော့ Family Mobile Tracker ကို
ဒေါင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် ရောက်ရင်တော့ အလယ်နား
ပြီးရင် ဝိုင်းပြထားတဲ့ share ကို နှိပ်လိုက်ပါ.
ပြောရင်တော့သူ့ Link ကို ယူတာပါ
ok ပြီးရင်တော့ box ကျလာပါလိမ့်မယ်
အဲ့မှာ ခုနက ဒေါင်းထားတဲ့ 920 text editor
ကို ဝင်လိုက်ပါ... ပြီးရင် ကျလာတဲ့ link တွေ
copy ကူးပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ broswer
တစ်ခုခုထဲ ဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင် google မှာ
apk downloader ဆိုပြီး ရိုက်ရှာပါ
ကျလာရင် အရင်ဆုံးကျလာတဲ့ site ထဲကို
site ထဲရောက်သွားရင်တော့ blank box
ကျလာလိမ့်မယ် အဲ့ box ထဲမှာ ခုနက
ကျွန်တော်တို့copy ကူးထားတဲ့apk လေးရဲ့
link ကို paste လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင် Generate Downlaoad Link ကို နှိပ်ပါ
ပြီးရင် click Here to download ဆိုတာလေးကုိ
ဖုန်းထဲမှာ ADM ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ box
အဲ့မှာ ADM Editor လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ
ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ post လေးကို အခုလို
နောင်လည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ နည်းပညာအနှစ်တွေကို
Min Oke Kar (နည်းပညာမှတ်စု)